“Dhaawaca Ousmane Dembélé khasaaro weyn ayey u tahay Barcelona” – Tababare Valverde – Gool FM
(Barcelona) 01 Dis 2019.Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa ka hadlay dhaawaca xiddigiisa reer France Ousmane Dembélé, kaasoo waqti dheer ka maqnaan doona Blaugrana.
Ernesto Valverde ayaa wuxuu dhinaca kale carabka ku adkeeyay in maqnaanshiyaha Ousmane Dembélé ay tahay Khasaaro weyn ee soo gaartay kooxda.
Ousmane Dembélé ayaa wuxuu dhaawac ka soo gaaray muruqa lugtiisa midig intii lagu gudajiray kulankii ay kula ciyaareen kooxda Borussia Dortmund tartanka Champions League, waxaana la filayaa inuu garoomada ka maqnaado ilaa iyo bisha Febraayo ee sanadka cusub.
Haddaba macalinka reer Spain ayaa wareysi uu bixiyay kahor kulanka caawa ay kooxda Atlético Madrid ku wada ciyaari doonaan horyaalka La Liga wuxuu kaga hadlay dhaawaca Ousmane Dembélé wuxuuna yiri:
“Ma aqaano sababta uu u soo gaaro dhaawaca noocan ah, waan la hadlay isaga, haatan aad ayuu kaga dagen yahay sidii uu ahaa kaddib markii uu dhaawaca soo gaaray”.
“Aad ayuu u walwalsanaa, gaar ahaan soo noqoshada dhaawacyada, waxaan isku dayi doonaa inaan ku buuxino booska uu ka maqan yahay Ousmane Dembélé ciyaartoyda heerka labaad ee kooxda”.
“Sida iska cad, tan iyo markii uu kooxda yimid labo sano ka hor, wuxuu la qabsanayay qaab ciyaareedkeena, wuxuu sameeyay horumar, si wanaagsan ayuu tababarka u sameynayay, balse waxaa ku yimid dib u dhac lama filaan ah, sababa la xiriira dhaawaciisa”.
Si kastaba ha noqotee, Barca ayaa caawa ku booqan doonta kooxda Atletico Madrid garoonkeeda Wanda Metropolitano, si ay u wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan kulamada 15-aad horyaalka La Liga dalka Spain ee xilli ciyaareedkan.
Kooxaha Juventus iyo Sassuolo oo dhibcaha ku qeybsaday Allianz Stadium…+SAWIRRO